Tsy mbola manomboka akory ny fifidianana : raikitra ny savorovoro sy korontan’ireo depiote teny Tsimbazaza | NewsMada
Tsy mbola manomboka akory ny fifidianana : raikitra ny savorovoro sy korontan’ireo depiote teny Tsimbazaza
Nifanjevo sy nifampihantsy ary nisavoritaka ireo depiote, omaly, teny Tsimbazaza tamin’ny fivoriana tokony ho nandinihana ny volavolan-dalàna fehizoro momba ny fifidianana. Efa ahitana taratra sahady ny mety ho fizotry ny fifidianana hatao amin’ity taona ity, izany.
Efa lanin’ireo depiote fa handray ny minisitry ny Atitany sady lehiben’ny governemanta, Mahalafy Solonandrasana izy ireo, miaraka amin’ny minisitry ny Fitsarana tamin’io omaly io. Niova indray anefa izany noho ny tsy fahaiza-mandrindra sy fitantanan’ny filoha lefitra nitarika ny fivoriana. Tsy vitan’izany fa tonga teny daholo koa ireo mpikamban’ny governemanta ary nambara koa fa fivoriana mikaton-trano izy ity. Tsy nanaiky izany anefa ireo avy amin’ny mpanohitra ary nanizingizina fa avelao hanao ny asany ny mpanao gazety. Niditra an-tsehatra hatramin’ny mpitandro filaminana nandamina izany. “Tokony ho fantatry ny vahoaka nifidy anay ny adihevitra atao eto. Manana zo amin’izany izy ireo… Tsy baikon’ny miaramila izany izahay fa olom-boafidy… Lapan’ny demokrasia ity ary masi-mandidy ny vahoaka… Tsy azo ekena izany hoe miverina amin’ny hevitra efa tapaka izany…”, hoy ny ampahan’ny fanehoan-kevitr’ireo depiote , tsy faly amin’ny ataon’ireo depiote namany.
Tsy nanaja ny teny nomena fa nivadika
Nohitsin’izy ireo fa efa tapaka tamin’ny lahadinika ny amin’ny handraisana ny minisitry ny Atitany sy ny Fitsarana nefa izao niova izao indray izany. Tsy levon’ireo depiote sasany koa ny tsy namelana ny mpanao gazety hanatrika ny adihevitra sy ny famelabelarana. « Tsy manaja ny teny nomena ireo birao mpitantana ka nanova tanteraka ny resaka tetiandro. Tsy ny governemanta iray manontolo no tokony hihaona aminay fa ny praiminisitra sy ny minisitry ny Fitsarana”, hoy ny depiote Razanamahasoa Christine. Nanteriny fa tokony hisy ny marimaritra iraisana, na tsy mipetraka aza, ny tena ara-drariny eny amin’ny Antenimierampirenena, kitro amaharan’ny demokrasia. Nampiaka-peo koa ny depiote Rakotomanga Lanto ary nilaza ny amin’ny tokony tsy hatahorana mpanao gazety amin’ny famoaham-baovao mitranga rehetra. “Miatrika raharaham-pirenena isika ka tsy tokony hatahorana izy ireo satria mitatitra ny vaovao rehetra mankany amin’ny vahoaka ka tsy tokony horoahina izy ireo”, hoy izy.
Tsy manana fahendrena sy ny maha olom-boafidy…
Antony nahatonga ny fampiakaram-peo teo amin’ireo depiote sasany izany ary nahatonga ny savorovoro. Tsy nisy intsony ny fifanajana na fifandeferana fa samy nanao ny saim-pantany. Siotsioka tsy nifandrenesana tao an-dapa.
Voatery naato mihitsy aloha izany ny fivoriana ny tapaka andro maraina, omaly.
Araka izany, efa ahitana taratra sahady ny mety ho fizotry ny fifidianana izao tranga niseho teny Tsimbazaza izao. Tsy hita taratra ny fahendrena amin’ny maha olom-boafidy azy ireo, misolo tena ny vahoaka nifidy. Savorovoro sy korontana ary fifampihantsiana. Hanao ahoana rehefa samy hanana ny kandidà sy ny hotohanany avy amin’ny fifidianana filoham-pirenena ?
Une réponse à "Tsy mbola manomboka akory ny fifidianana : raikitra ny savorovoro sy korontan’ireo depiote teny Tsimbazaza"
Zafisoa 15/03/2018 à 16:12
Tsy mahagaga fa eto Gasikara, efa ela nodiso zotra é. Vokatry ny fanjakan’ny madinika natao teto izany, ny paradisa sosialista, ny ento miakatra ity firenena ity sy ny 4L isambaravarana. Izao indray asandratra indray amin’ireto vahoaka kamo manaraka discipline. Ny mpampihatra discipline aza toa sadasada manantsoratra. Tsy hay intsony fa …